नेताको आशीर्वाद गुन्डालाई अभिशाप, इन्काउन्टरमाथि शंका : भारतकाे गोवामा पक्राउ नेपालमा गोली ! – Etajakhabar
नेताको आशीर्वाद गुन्डालाई अभिशाप, इन्काउन्टरमाथि शंका : भारतकाे गोवामा पक्राउ नेपालमा गोली !
काठमाडौं, १० फागुन । एमाले नेता गौतम गृहमन्त्री भएकै वेला चरीको ‘इन्काउन्टर भएकाे थियाे । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ- चरी उपनामले कुख्याती कमाएका धादिङका दिनेश अधिकारी काठमाडौंको नयाँ बजारलाई आधार क्षेत्र बनाएर अपराधमा संलग्न थिए । थप उचाइ चढ्न एमाले प्रवेश गरेका उनी धादिङ–१ क्षेत्रीय कमिटीको उपाध्यक्षसमेत बने । राजनीतिक संरक्षणमा शक्ति बढेपछि उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई दिउँसै गोली हान्न पनि थाले ।
राजनीतिक संरक्षणले घैँटेको व्यवसाय जोगियो, ज्यान जोगिएन काठमाडौं नयाँ बजारका स्थानीय कुमार घैँटे कांग्रेसी नेताहरूको छत्रछायामा हुर्किएका डन थिए । निर्माण व्यवसायीका अनुसार कांग्रेसका जगदीश्वरनरसिंह केसीको परिवार र कुमार घैँटे व्यावसायिक साझेदार नै थिए । घैँटे तरुण दलमा प्रवेश गरेर समाजसेवी पनि बनेका थिए । तर, उनले अपराध कर्म छाडेनन् ।
जेलमै ग्याङफाइटमा मारिए अर्का डन चितवन कारागारमा एमालेनिकट चमेरे ग्याङसँग झडप हुँदा कांग्रेसनिकट कमिला ग्याङका शिवराज पौडेल मारिए । राजनीति र अपराधमा सँगसँगै हुर्किएका पौडेल नेपाल तरुण दलका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षसमेत थिए ।
इन्काउन्टरमाथि शंका मनोजले हानेको गोली मोटरसाइकलमा, प्रहरीले हानेको गोली छातीमा ! पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, ‘एकपछि अर्को इन्काउन्टरमा शंकै छ ।’
गोवामा पक्राउ नेपालमा गोली ! भारतको गोवामा केही दिनअघि नै पक्राउ गरेर ल्याइएको र बुधबार बिहान गोली हानिएको चर्चा छ । तर, रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम ज्ञवाली भन्छन्, ‘खोज्दै जाँदा देवदहको मुख्य सडकमा जम्काभेट भयो, उनीहरूले फायरिङ गरे ।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १०, २०७४ समय: १०:३९:३५